कसरी आफ्नो टाउको मा arafatki बाँध गर्न? व्यावहारिक पुस्तिका
arafatka रूपमा यस विशेष स्टाइलिश विशेषता झन् जवान मान्छे लोकप्रिय नवीनतम रुझान लागि देख को दराज मा देख्न सकिन्छ। यो असामान्य शाल मात्र होइन महिला पनि पुरुष जानुहोस्। यो सुन्दर सजावट यूनिसेक्स रूपमा वर्गीकृत गर्न सम्पूर्ण सम्भव छ।
वास्तवमा arafatka वा shemag - यो सामान्य रुमाल वा रूमाल थकित अरब मानिसहरू छ। तर, हाल संसारमा रुझान, झन् यो जातीय उत्प्रेरणा, उधारो लुगा वा अन्य जातिका ती, फिर्ता गर्दै यो नयाँ जीवन र लोकप्रियता दिने।
उज्ज्वल र फैशन shemag - लगभग कुनै पनि outfit गर्न सिद्ध सहायक, कुनै कुरा यो के शैली छ, क्लासिक वा युवा।
कसरी arafatki बाँध गर्न आफ्नो टाउको मा?
त्यहाँ धेरै तरिकाहरू छन्। परंपरागत पगरी लगाएको छलफल। diagonally रूमाल गुना र यसको अन्त्य पछाडि सिधा देखा तरिकामा टाउको मा फेंकता। त्यसपछि arafatka बायाँ फिर्ता हुन्छ र टाउको वरिपरि र्याप छ। टाउको को पछाडि कपडा अन्तर्गत शाल लुकाउने अन्त।
तपाईं सिकाउन कसरी arafatki बाँध गर्न परम्परागत तरिकामा रंग, हामी थप एक जानुहोस्। उहाँले एक विशेष होल्डिंग सर्कल प्रयोग गरेर headscarf लगाएका छ। त्यसैले अरब shemag छन्। यो विधि धेरै सरल छ र कुनै विशेष कौशल आवश्यक छ। शाल कहिल्यै बाँध गर्न सक्छन् र पकड प्राथमिक लक उनको टाउको मा समुदाय (रान्डेल)।
त्यहाँ टाउको मा arafatki संलग्न कसरी तेस्रो तरिका हो: यो निधारमा को बीचमा को टिप लामो किनारा थियो भनेर लम्बाइ मा रुमाल फैलाउन आवश्यक छ। तिनीहरूले flagella परिणत छैन रूपमा सुझावहरू जस्तै समय सम्म मुड arafatki। दुपट्टा उनको टाउको वरिपरि र्याप। पछि यो सानो braids मा गाँसिएको छ।
यो आफूलाई inclement मौसम देखि सुरक्षा गर्न यस्तो रुमाल संग सम्भव छ? कसरी यस मामला मा एक arafatki बाँध गर्न?
त्यहाँ एक तरिका हो। shemag fastened तेस्रो विधि सुरु गर्न - घुमाई। त्यसपछि, निःशुल्क समाप्त मा निधारमा राखिएका छन् जो harnesses, गर्न क्रस र संलग्न व्यक्ति गरेर अगाडि फ्याँकिन्छन्।
अरबी रूमाल - धेरै व्यावहारिक र सुविधाजनक कुरा। यसलाई ऊन वा कपास सूत्रहरू बाट बनेको छ, तर आधुनिक उद्योग झन् कृत्रिम फाइबर र Viscose प्रयोग गर्दछ। यो, पाठ्यक्रम, के अरब रूमाल, तर किफायती मोडेल छ।
क्लासिक संस्करण - यो कालो र सेतो रंग हो, तर आधुनिक arafatki फरक रंग, रंग र आकार छ।
सबैभन्दा वसोवास लोकप्रिय फारसी खाडी सेतो रूमाल मानिन्छ। यी उत्पादनहरू यसको निर्माण मा विशेष बुनाई द्वारा सिर्जना भएको एक विशेष ढाँचा द्वारा विशेषता छन्। यसलाई त्यहाँ पनि एक बच्चा arafatki रंग कसरी बाँध गर्न थाह छ कि आश्चर्य छैन।
Arafatki अब मात्र होइन न्यानो क्षेत्रमा प्रसिद्ध। झन्, तपाईंले यी ऊनी देख्न सक्नुहुन्छ को टाउको मा स्कार्फ उत्तरी देशहरूको बासिन्दाहरू। यो headpiece पूर्ण जैकेट, कोट, र raincoats, जीन्स र छाला लुगा संग संयुक्त छ।
यी स्कार्फ fashionistas बीच धेरै लोकप्रिय छन्। तिनीहरूले थाहा कसरी टाउको मा arafatki बाँध गर्न, त्यसैले सुन्दर आफ्नै शैली स्वाद र originality लाने, भीड देखि आफूलाई छुट्टयाएर।
किन तरकारी लागि सुखाने?
जेन स्लालम प्रो: सबै भन्दा राम्रो विकल्प आफ्नो बच्चाहरु को लागि
भान्सा pelmets? किन छैन। मोडेल चयन
Dota2- «महिमा लागि, युद्धमा लागि!»: कसरी सुरु गर्ने?
नयाँ "परजीवी": भाइरस सामाजिक सञ्जाल रोक्दै
सिम्युलेटर मा हुक-अप: उचित प्रविधी कार्यान्वयन र सिफारिसहरू
केही चिरपरिचित विधिहरू: कसरी अन्डा को ताजगी निर्धारण
लियोनिद Stadnik - दुनिया मा ऊंची मानिस: वृद्धि, फोटो
खमीर मुछेको घर बन्स
मेट्रो लस एन्जलस: रेखाचित्र, वर्णन, इतिहास र रोचक तथ्य
युवा अभिनेता: "गाढा स्वर्गदूत" - एक सफल क्यारियर Dzhessiki Alby को सुरु
"Dayvobet" मलम: प्रयोग, संरचना र समीक्षा लागि निर्देशन